i-iron oxide ebomvu 110/120/130 / ...
Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka okanye umgubo okhanyayo ohlaza okwesibhakabhaka, umbala oqaqambileyo, umbala omeleleyo, ukufihla amandla kancinci. Kunzima kakhulu. Isinyithi i-oxide eluhlaza okwesibhakabhaka inamandla amakhulu okupenda, ukukhanya okuhle, ukukhanya okungalunganga kwe-alkali kunye nokuchasana nobushushu obuphezulu
Imveliso exutywe nge-Iron Orange yenziwe nge-iron oxide ebomvu kunye ne-iron oxide etyheli exutywe, kunye neepropathi ezilungileyo zombala, ezinje ngombala wombala, ukufihla amandla kuphezulu kakhulu. Ngokumelana nemozulu elungileyo, umbala oqaqambileyo njalo njalo.
I-iron oxide grey luhlobo lwe-pigment engaphiliyo edityaniswe zizongezo. Ukusuka kumbala omdaka ukuya kumbala omnyama. Inempawu ezintle zomzimba kunye neekhemikhali. Inamandla okogquma amandla, umbala ophakamileyo, umbala othambileyo, ukusebenza okuzinzileyo, kunye nokungabinetyhefu. Luhlaza okhuselo lokusingqongileyo; ayimelana nealkali, izinzile kubuthathaka be-asidi kwaye inyibilikise iasidi, kwaye inokukhanya okuhle kunye nokumelana nemozulu, kwaye ayinyibiliki emanzini.
1). Imibala eqaqambileyo yomgubo.
2). Isimo sezulu esihle (Ukuqina, ukunganyamezeli ubushushu kunye nokumelana nealkali)
3). Amandla okushicilela anamandla, ukugubungela ngokugqwesileyo kunye nokusasazeka okuhle.
Ukuncamathisela umbala luhlobo lokhuselo lombala lokusekwa kwamanzi okusingqongileyo, i-pigment, izongezo kunye namanzi afakwa kwi-disperser ukuze usile kwaye usasaze. Umbala wahlulwe wabomvu, tyheli, bhlowu, luhlaza, wavuka wabomvu, pinki njalo njalo. Inamandla amakhulu okufaka imibala, ukusasazeka, ukungqinelana, ukumelana nokukhanya, ukumelana nemozulu kunye nozinzo.
Umgubo omdaka. Ingenakunyibilika emanzini, utywala, i-ether, inyibilike kwiasidi eyomeleleyo eshushu. Umbala ophezulu kunye namandla okufihla. Ukukhanya okuhle kunye neAlkali Resistance. Ukungena kwe-anhydr kunye ne-permeability yeoyile. Umbala ngenkqubo eyahlukileyo, kukho oMthubi oMthubi, oBomvu oMnyama, oMnyama uBrown njalo njalo.